Fumana amakhulu eetemplate ze-Keynote kunye namaphepha ngexabiso elingenangqondo | Ndisuka mac
Ngaba udikwe kukwenza intetho ebonakala ifana? Ngaba uyafuna ukubonisa umsebenzi weklasi uyilo olutsala umdla kunye nokuhlaba umxhwele? Ukususela ngoku unako Nika intetho yakho kunye nomsebenzi wakho ngononophelo ngakumbi, ngobungcali kunye nembonakalo yentsusaEwe, namhlanje ndikuzisela izicelo ezibini ezilungiselelwe abo basebenzisa i-Keynote kunye / okanye amaPhepha mihla le, nangona ungakwenzi oko, uyakhuthazeka ukuba utshintshele kwi-office suite kwibhloko ukuze umsebenzi wakho ujonge bhetele kunakuqala.
Ku malunga Izikhokelo ngamaphepha y Izikhokelo ze-Keynote, izicelo ezimbini kanye kanye ezithembisayo, iitemplate zamaphepha kunye neKeyynote onokuyisebenzisela ukwenza intetho yakho kwaye usebenze ngendlela elula kakhulu kwaye yoqobo, kwaye eyona ilungileyo, ngexabiso elimangalisayo kuba namhlanje ungazifumana ngesaphulelo esingaphezulu kweepesenti ezingama-90.
1 Izikhokelo ze-Keynote
2 ILebhu yeTemplate yeShishini-iitemplate zamaphepha
Eyokuqala yezi zicelo yile Izikhokelo ze-Keynote, Isicelo esiza kusetyenziswa kunye ne-Keynote app kwi-Mac yakho kwaye ubenako ukwenza imiboniso eyahlukileyo, eyahlukileyo, yoqobo kunye nokugqitywa kobuchwephesha. Yipakethi ene ngaphezulu kwe Iitemplate ze150 ezikumgangatho ophezulu zeKeynote. Nganye yezi templates ibandakanya ukuya kuthi ga kwi-25 izilayidi ze-master ezahlukeneyo, kwaye ukusebenza kwayo kulula kakhulu: khetha uyilo oluthanda kakhulu, khetha olona hlobo lululo ubukhulu ezimbini ezikhoyo (4: 3 okanye 16: 9) kwaye uqalise ukufaka ulwazi lwakho lwenkcazo. Izikhokelo ze-Keynote Yenzelwe ukuba ugxile kumxholo wentetho yakho ngaphandle kokukhathazeka yoyilo.
Izikhokelo ze-Keynote Sisicelo esenziwe liqela leNode yeGraphic, ejongene nokuyihlaziya rhoqo kwaye kubandakanya umxholo omtsha. Ngapha koko, uhlaziyo lwayo lokugqibela yinyanga nje edlulileyo, ngo-Epreli 24, kwaye ibandakanya ukubandakanywa kwe iitemplate ezintsha ezilishumi elinambiniI-ace yeKeyynote.
Izikhokelo ze-Keynote Ifuna ukuba ube nohlobo lwamva nje lwe-Keynote efakwe kwi-Mac yakho, kwaye iyahambelana neekhompyuter ezisebenzisa i-macOS 10.12 nangaphezulu.
Izikhokelo ze-Keynote Kuyinxalenye yephulo lokuThengiswa kweeVenkile ze-App ze-Mac ukuba veki nganye isizisele izicelo ezimbini ezikumgangatho ophezulu nezaphulelo ezigqithe kumashumi alithoba eepesenti. Iveki iqala ngale app inamaxabiso aqhelekileyo yi- $ 24,99 kodwa ngoku unokufakwa kwikhompyuter yakho nge- € 1,09 kuphela ixesha elincinci. Isithembiso siqalisile namhlanje kwaye siyakusebenza kude kube ngomso, ngolwesiThathu ngoMeyi 24 nge-23: 59 pm nangona kunjalo, ngenxa yemimandla yexesha, ukuba unomdla kuyo, ndikucebisa ukuba uyithenge ngokukhawuleza ukuze uzuze isaphulelo.
ILebhu yeTemplate yeShishini-iitemplate zamaphepha
Isicelo sesibini endikuzisa kuso namhlanje sifana kakhulu nesangaphambili, nangona kule meko kunjalo itemplate yokwenza umsebenzi wakho kumaphepha abonakale enobungcali ngakumbi kunye neyantlandlolo.
Iphuhliswe liqela leJumsoft, ILebhu yeeTemplate zeShishini yamaphepha Yiphakheji ebandakanya amakhulu eetemplate ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso onokuyisebenzisa ngokulula kunye namaphepha ukwenza iilebheli, iitshathi ze-org, iincwadana, izibhengezo, amakhadi oshishino, iifom, ii-invoyisi, iitshathi ze-org, izimemo, iikhalenda, ukucwangciswa nokunye okuninzi.
Njengangaphambili, injongo yayo kukuba ungagxila kumxholo wokulibala malunga noyilo. Kule nto, ukusebenza kwayo kulula njengangaphambili Izikhokelo ze-Keynote: khetha nje itemplate kwaye uqalise ukuyiguqula ngomxholo wakho. Ngale ndlela, imisebenzi yakho iya kuba nembonakalo eyahlukileyo kunye neyantlandlolo eya kuchukumisa.
Kwakhona, ILebhu yeeTemplate zeShishini yamaphepha ihlaziywa rhoqo kubandakanya iitemplate zobungcali nezenzelwe ngokukodwa.
ILebhu yeeTemplate zeShishini yamaphepha ifuna inguqulelo yamaphepha 5.6 kunye ne-OS X 10.11 okanye kamva. Kuyinxalenye yephulo leDola ezimbini ngoLwesibini ukuze ulifumane kuphela nge- € 2,29 endaweni yesiqhelo € 19,99 kude kube kungomso ngokuhlwa.
QAPHELANokuba ndivela eMac kwaye andinalo naluphi na uhlobo lobudlelwane nabaphuhlisi bezicelo zangaphambili kwaye asinanto yakwenza nezibonelelo ezicetywayo ngabo. Sinokuqinisekisa kuphela ukuba unyuselo lwalusebenza ngexesha lokupapasha esi sithuba njengoko singenalwazi kulo naluphi na utshintsho kwisigqibo malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Fumana amakhulu eetemplate ze-Keynote kunye namaphepha ngexabiso elihlekisayo